musha nyika dzakabatana Singers Nyasha VanderWaal Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara YeMusiki Celeb ine zita rezita “Inotevera Taylor Swift". Yedu Nyasha VanderWaal Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezwi rake rakasarudzika uye nehunyanzvi kushandisa ukulele. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveGrace VanderWaal's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Nyasha VanderWaal Nyaya yeUcheche Nyaya:
muimbi Nyasha Avery VanderWaal akazvarwa pazuva re15th raJanuary 2004 kuLenexa, guta riri muJohannes County, Kansas, United States. Aive wechitatu pavana vatatu akazvarwa kuna mai vake, Tina VanderWaal uye kuna baba vake, David VanderWaal.
Nyika yeAmerican yenyika yedzinza chena ine midzi yechiDutch uye yeScotland yakarererwa mumusha weSuffern muNew York maakakurira pamwe chete nevanun'una vake vaviri vakuru; Jakob VanderWaal naOlivia "Liv" VanderWaal.
Kukura muSuffern, mudiki Nyasha aive anofarira mimhanzi uyo akatanga kuimba nekunyora nziyo dzake pazera diki remakore matatu. Sezvo makore aifambira mberi, kuda kwaGrace kwekuimba kwakakura naye uye kwakazosvika panguva isingagutsikane mushure mekunge apinza kunyora mimhanzi kune hunyanzvi hwake.
Nyasha VanderWaal Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo kuimba-kwese nekunyora mimhanzi Grace aive akura gumi, akatanga kufarira kudzidza kuridza ukulele mushure mekuona mimhanzi yeAmerica - Makumi maviri eVatyairi - vhidhiyo paYouTube.
Mwedzi yakati gare gare, Nyasha akakumbira kuti chiridzwa chinofanira kutengwa kwaari sechipo chekuzvarwa kwake kwegumi nerimwe. Nekudaro, amai vaGrace vakaramba chikumbiro ichi vachifungidzira kuti muimbi ari kutangisa haazombodzidza kuitamba.
Asingadzokere shure, muimbi wekuimba akaenderera mberi nekutenga chiridzwa - achishandisa mari yaakange agamuchira yekupemberera zuva rekuzvarwa kwake - uye akapa nguva yakanaka yekudzidza kuiridza kunyangwe achiitirwa dzimba uye panguva yezvidzidzo zvake kuSuffern Middle School.
Nyasha VanderWaal Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Hazvina kutora nguva Nyasha asati akwanisa kuridza Ukulele ndokutanga kurekodha nziyo dzekuvhara nechiridzwa muna 2015.Gore rakaonawo Nyasha achitanga kutumira mavhidhiyo ake achiimba paYouTube pamwe nekuita zviripachena pamitambo yakavhurika mic padhuze nepamba pake.
Pasina mubvunzo kutaura zvakawanda, tarenda raGrace pazera nyoro re12 raive rekuona uye nzeve-kubata. Kurumbidzwa kwakanaka hakuna kana kunetsa kusvika kune wechidiki ane tarenda uyo akaenda kunovhenekwa kwemwaka wegumi neimwe weAmerica akawana tarenda show (AGT).
Nyasha VanderWaal Road KuMukurumbira Nyaya:
Ndichiri kugadzirira kuongororwa kweAGT show muna Chikumi 2016 hazvina kumboitika kunaGrace kuti kuongorora kwacho chaiko kwaive shanduko yaizomuisa panzira yekuve nemukurumbira. Chiitiko ichi chakaona kutamba kwaGrace rwiyo rwake rwekutanga "Ini Handizive Zita Rangu" achiwana yaHowie Mandel, "yegoridhe buzzer" iyo yakamukurudzira kuenda kumaquarterfinal round akarongerwa 23 yaAugust gore iro.
Zvinoshamisa kuti, Nyasha anga asiri mumwe wekuti anyanye kunetseka nezvekota sezvo aichengetedza mikana yekuita zviitiko zviviri zvikuru. Yekutanga yaive kuRamapo Summer Concert Series muPalisades Credit Union Park (Chikunguru 08 2016) mushure maizvozvo akaita kuLafayette Theatre muSuffern (Chikunguru 30th 2016).
Nyasha VanderWaal Rise To Fame Nyaya:
Nyasha akadzoka kumutambo unotevera kumaquarterfinal eAGT show nekuimba rwiyo rwekutanga "Chinhu Chakanaka" chakamuona kusvika kuma semi fainari. Nziyo dzake dzakazotevera dzezvikamu zvakasara zvechiitiko zvinosanganisira "Chiedza Denga" (Semi-Yekupedzisira) "Clay" (mafainari) uye "Ini Handizive Zita Rangu" (great finale).
Iye-ane makore gumi nemaviri-wekupedzisira akaziviswa semukundi weAGT 12 akateedzana, chiitiko chakamuona ave mukadzi wechipiri anokunda pamwe neyechipiri mwana chiito mukundi munhoroondo yekuratidzira.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Nyasha ari kuchovha pazita rake reAGT kuvaka basa rinokurumidza kusimuka muindastiri yemimhanzi neake dambarefu album iri "Just the Beginning" 2018. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nyasha VanderWaal Hukama Hupenyu Chokwadi:
Iwe unoziva here kuti Nyasha ane makore 15 chete panguva yekunyora iyi bio? Pane zera rakadai, havazi vazhinji vangashamisika kuziva kuti iye haana kuroora (zvirokwazvo haana kuroora) uye anogona kunge asina kumbobvira abhuroka zvakanyanya nepfungwa dzekuva nemukomana.
Iyo yekuimba yekunzwa inonyanya kutarisa pakuwana zvakawanda pazera rake nyoro sezvo basa rake richiri kungofungidzirwa kuve riri pamusoro panguva yekunyora. Izvi hazvitauri kuti zvinogona kutora nguva yakareba vateeri vasati vaona Nyasha nemoyo wekutenderera kana kuendesa mainini ekutanga evanakomana kuvanakomana (nevanasikana).
Nyasha VanderWaal Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Zvakawanda sei zvaunoziva iwe nezvemhuri yaGrace yeVanderWaal? gara kumashure apo isu tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yemuimbi, kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaGrace VanderWaal: David VanderWaal ndibaba vaGrace. Ndiye mushambadzi anga achipinda mubhizimusi rekushambadzira kubvira achiri mudiki Nyasha. Ivo baba vevatatu ndevekuDutch mavambo uye vanoshanda seMutevedzeri weMutungamiri weKushambadzira kuLG Electronics USA panguva yekunyora. Ane chemistry yakanaka naGrace uye haamborega kumutsigira kuburikidza nema media media ake anobata.
Nezve amai vaGrace VanderWaal: Tina VanderWaal ndiamai vaGrace. Iye anoshanda semugadziri wechitoro windows kuratidza panguva yekunyora. Hazvishamise kuti maVanderWaals anoonekwa seemhuri yepakati-yemhuri kumashure. Tina ndewekutanga kweScotland uye akatongwa kuve iye akanakisa amai munyika naGrace. Kunyanya zvakadaro, muimbi anonakidzwa nekuona amai vake vachishandisa vezvenhau kunongedza zvine mutsindo nezvezvakaitika muindasitiri yemimhanzi.
Nezve vanin'ina vaGrace VanderWaal: Nyasha ane vakoma vaviri. Mukoma mukuru anonzi Jakob VanderWaal pamwe nasisi mudiki anozivikanwa saOlivia "Liv" VanderWaal. Jakob akadzidza kuCamden Military Academy muSouth Carolina - panguva yekunyora - aine tarisiro yekuzoita basa remauto. Kudivi rake, Olivia mutambi anofarira zvemimhanzi zvakare ane zvido mufashoni. Ivo vaviri vanin'ina vakabatsira muhupenyu nekusimuka kwaGrace VanderWaal uye vanoshanda nevabereki vavo kupa Nyasha rutsigiro rwaanoda.
Nezve hama dzaGrace VanderWaal: Nezve hupenyu hwakawedzerwa hwemhuri hwaGrace. Vanasekuru vababa vake vakaonekwa saJohn Anthony VanderWaal naAckie Ruth Vogelaar apo ambuya vake amai vaamai ndiPatricia Kowalski. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve vatete vevaimbi, babamunini uye babamunini uye hapana aripo marekodhi nezve babamunini nemuzukuru wake.
Nyasha VanderWaal Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Achienderera kumberi pahunhu hwaGrace VanderWaal, iye ane anoshamisa Persona iyo inoratidza chivimbo uye chakarongeka hunhu hwevanhu vanotungamirirwa neCapricorn Zodiac chiratidzo
Kunyanya, iye anoshamisa, mune zvemukati mune tune, yekugadzira uye zvine mwero inoratidza zvakawanda nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutora mifananidzo, fashoni, kuchengeta mhuka dzinovaraidza, kutamba mitambo uye kushandisa nguva yepamoyo neshamwari nemhuri.
Nyasha VanderWaal Maitiro ehupenyu:
Nyasha VanderWaal ane huwandu hunofungidzirwa hwemamirioni maviri emadhora panguva yekunyora. Zvikamu zvikuru zveHer 2 madhora emari zvinobva pamari inowanikwa kubva kuimba kwake kwenziyo; "Zvakakwana Zvakakwana", "Ini Handizive Zita Rangu" & "Mwenje Wemwedzi".
Muimbi uyo achiri pamusoro pekukwira, anogara nevabereki vake panguva yekunyora. Zvikonzero zvehupenyu hwakadaro hwekuchengetedza hunogumira pamubvunzo wekuti akanaka kwazvo asina kurongeka uye anoda nhungamiro yakaringana yekuronga hupenyu hwake. Kunyangwe Nyasha anga asati aine mota, ndiye muridzi weudado weimba yemuti nemapapu maviri akasiyana akabatanidzwa ne bhiriji. Anofarira kushandisa nguva pane yekuruboshwe gadhi uye akapa chipo chakaringana kuna sisi vake mukuru.
Nyasha VanderWaal Untold Chokwadi:
Kuunza magumo eNyasha yedu VanderWaal nyaya yehucheche uye bio, heano mashoma asinga zivikanwe-chokwadi maererano nemuimbi.
Chitendero: Nyasha VanderWaal muKristu. Anobatana nekereke yeMethodist yechiProtestanti chiKirisitu uye akabvuma kuti boka rechitendero nderimwe ramaitiro ake makuru ekutsigira.
Tattoos: Unyanzvi hwemuviri hwakauya pakutanga kuna Nyasha chaizvo pazera re15 paakawana tattoo yenzou kuru ruoko rwake rwerudyi. Kutora mubato wake we twitter kuratidza chikonzero chiri kumashure kwe tattoo, Nyasha akatsigira kuti maNdlovu ane chipo chekunzwa, achiwedzera kuti ma tattoos anomiririra chipo chekurira.
Kusvuta uye kunwa: Muimbi haaputi, uye haana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Ari pachinzvimbo chekuchengeta hupenyu hune hutano sezvaanoisa meso ake pabasa rekufambira mberi nemakore.
Chikonzero kumashure kwezita rezita: YaGrace yakapihwa zita remadunhurirwa rekuti “rinotevera Taylor Swift”Nemumwe wevatsoropodzi vane mukurumbira pasi rose - Simon Cowell - nekuti vanogoverana zvakafanana zvisingarambiki. Iri zita remadunhurirwa rakasimbiswa nevazhinji vane mukurumbira vanotenda kuti Nyasha akakwana.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Nyasha VanderWaal Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
VERENGA Celine Dion Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts